Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 6:1-20
Kristofo a na wɔde wɔn nuanom Kristofo kɔ asɛnnibea (1-8)
Wɔn a wɔrennya Ahenni no (9-11)
Momfa mo nipadua nhyɛ Onyankopɔn anuonyam (12-20)
“Munguan mfi aguamammɔ ho!” (18)
6 Sɛ mo mu bi ne ne yɔnko nya asɛm+ a, enti otumi si ne bo de no kɔ asɛnnibea wɔ nnipa a wɔnteɛ anim, a ɔmfa no nkɔ akronkronfo no mmom anim? 2 Anaa munnim sɛ akronkronfo no na wobebu wiase atɛn?+ Na sɛ mo na mubebu wiase atɛn a, nsɛm nketenkete na morentumi mmu ho atɛn anaa? 3 Munnim sɛ yebebu abɔfo atɛn?+ Sɛ yebebu abɔfo atɛn a, ɛnde asetena yi mu nsɛm* na yɛrentumi mmu ho atɛn? 4 Na sɛ mowɔ asetena yi mu nsɛm a ɛsɛ sɛ mudi+ a, wɔn a asafo no mmu wɔn no na mode wɔn yɛ atemmufo? 5 Mereka eyi de ahyɛ mo aniwu. Enti onyansafo baako koraa nni mo mu a obetumi abu ne nuanom ntam atɛn? 6 Ɛnna onua paa tumi de onua kɔ asɛnnibea, wɔn a wonnye nni anim! 7 Nokwasɛm ne sɛ, sɛ obiara de ne yɔnko kɔ asɛnnibea a, ɛnde na moadi nkogu dedaw. Adɛn na momma wɔnyɛ mo bɔne mmom?+ Adɛn na momma wonsisi mo mmom? 8 Mmom, mo na moyɛ nkurɔfo bɔne na musisi wɔn; moamfa anyɛ obiara nso sɛ mo nuanom! 9 Anaa munnim sɛ wɔn a wɔnteɛ no rennya Onyankopɔn Ahenni?+ Mommma wɔnnnaadaa mo. Aguamammɔfo,*+ abosonsomfo,+ awaresɛefo,+ mmarima a wɔma mmarima ne wɔn da,+ mmarima a wɔne mmarima da,+ 10 akorɔmfo, adifudepɛfo,+ akɔwensafo,+ wɔn a wotwa nkurɔfo adapaa,* ne apoobɔfo rennya Onyankopɔn Ahenni no.+ 11 Saa na na mo mu binom te. Nanso wɔaguare mo kama;+ wɔatew mo ho;+ wɔabu mo atreneefo+ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, ne yɛn Nyankopɔn honhom mu. 12 Mewɔ hokwan sɛ meyɛ nneɛma nyinaa, nanso ɛnyɛ nneɛma nyinaa na mfaso wɔ so.+ Mewɔ hokwan sɛ meyɛ nneɛma nyinaa, nanso meremma biribiara mfa me nyɛ akoa.* 13 Aduan wɔ hɔ ma yafunu, ɛnna yafunu nso wɔ hɔ ma aduan, nanso Onyankopɔn bɛsɛe abien no nyinaa.+ Nipadua nni hɔ mma aguamammɔ;* ɛwɔ hɔ ma Awurade,+ na Awurade nso wɔ hɔ ma nipadua no. 14 Na Onyankopɔn nyan Awurade,+ na yɛn nso, ɔnam ne tumi so+ benyan yɛn afi awufo mu.+ 15 Munnim sɛ mo nipadua yɛ Kristo akwaa anaa?+ Memfa Kristo akwaa nkɔ nkɔfam tuutuuni ho anaa? Merenyɛ saa da! 16 Munnim sɛ obiara a ɔde ne ho akɔfam tuutuuni ho no, ɔne no ayɛ nipadua koro anaa? Efisɛ Onyankopɔn aka sɛ: “Wɔn baanu no bɛyɛ ɔhonam koro.”+ 17 Na obiara a ɔde ne ho afam Awurade ho no, ɔne no ayɛ baako wɔ honhom mu.+ 18 Munguan mfi aguamammɔ* ho!+ Bɔne biara a onipa yɛ no nni ne nipadua mu, na nea ɔbɔ aguaman* de, ɔyɛ ɔno ara ne nipadua bɔne.+ 19 Munnim sɛ mo nipadua yɛ honhom kronkron a ɛwɔ mo mu a munya fii Onyankopɔn hɔ+ no asɔrefi?+ Bio nso, monyɛ mo ara mo dea, na mmom moyɛ Onyankopɔn dea,+ 20 efisɛ wɔtɔɔ mo aboɔden.+ Sɛnea ɛte biara, momfa mo nipadua+ nhyɛ Onyankopɔn anuonyam.+
^ Anaa “nneɛma.”
^ Anaa “wɔsopa afoforo.”
^ Anaa “nni me so tumi.”
^ Anaa “nea ɔte aguamammɔ mu.”